Nagarik News - उड्ने पनि बढे, ठगी पनि बढ्यो
३ श्रावण, २०७१
कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४ लाख ६६ हजार ५ सय १५ जना पुगेको छ। बेरोजगारीका कारण लाखौँ नेपाली कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ४ लाख ६६ हजार ५ सय १५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार जेठमा मात्र ५४ हजार ९ सय २६ जना विदेशिएका थिए।
विदेश जानेमा म्यानपावर कम्पनीबाट ३ लाख ९३ हजार ३ जना र व्यक्तिगत रूपमा ७३ हजार ९४ जना रहेका छन्। म्यानपावर कम्पनीबाट ३ लाख ७९ हजार ८ सय ८९ जना पुरुष र १३ हजार १ सय १४ जना महिला विदेश गएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा ५९ हजार १ सय ९० पुरुष र १३ हजार ९ सय ४ जना महिला रहेका छन्।
विदेशिनेमध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया गएका छन्। मलेसियामा ११ महिनामा १ लाख ८३ हजार ४ सय २३ जना गएका छन्। कतारमा १ लाख १६ हजार २ सय ६५ र साउदी अरबमा ७६ हजार ९ सय ४० जना गएका छन्। यूएईमा ४९ हजार ५ सय ६५, कुवेतमा १ लाख ८३ हजार ३ सय ९४, बहराइनमा ३ हजार ८ सय ११, ओमनमा ३ हजार १ सय ९४, दक्षिण कोरियामा १ हजार ५ सय ६२, जापानमा १ हजार ९ सय ४७, लेबनानमा १ हजार २१, इजरायलमा ६ सय ४८, अफगानिस्तानमा ३ सय ९९ र अन्य मुलुकमा ८ हजार ७ सय २३ जना नेपाली कामदार पुगेका छन्। सरकारले रोजगार गन्तव्यका लागि १ सय ८ मुलुक खुला गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाइदिने भन्दै २ हजार ३ सय ५ जनालाई ठगेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको छन्।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक महिनाको अवधिमा व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर विभागमा २ हजार ३ सय ५ जनाले ९३ करोड ५६ लाख ५३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ दाबीसमेत गरेका छन्। उजुरीमा सबैभन्दा बढी संस्थागत उजुरी परे पनि व्यक्तिगत उजुरीमा दाबी रकम बढी छ। व्यक्तिगततर्फ ८ सय ९९ र संस्थागततर्फ १४ सय ६ उजुरी परे पनि संस्थागततर्फ २४ करोड ३१ ल्ााख ९० हजार ३ सय ८३ रकम दाबी गरिएको छ। व्यक्तिगततर्फ ६९ करोड २४ लाख ६२ हजार ९ सय ५९ रकम दाबी गरिएको छ।
११ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागमा दुई पक्षबीच सहमति भई उजुरी फिर्ता, रकम तिरेको र मिलेको गरी ४ सय १७ जनाले फरफारक गरेका छन्। संस्थागत र व्यक्तिगत गरी १५ करोड २८ लाख ५५ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ फरफारक गरिएको हो। ११ महिनामा संस्थागतको ५ र व्यक्तिगतको १ सय ७ जना विरुद्ध विभागले अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा ४१ करोड ५ लाख ५३ हजार ७ सय ३७ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो।
गुम्ला नि सुन्दरता !
हरेक महिलाको चाहना हुन्छ– आफ्नो अनुहार सुन्दर होस्, जीउडाल मिलेको होस्। तर, कोठी, चायापोतो, दाग, अनावश्यक रौँ आदि सौन्दर्यमा खलनायक भएर देखापरेपछि तिनलाई निर्मूल पार्न उनीहरू ब्युटी पार्लर पुग्छन्, विज्ञापनका...
यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने 'गेम'
संसदीय दलको नेता चुनिएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनको पहल थालेका छन्। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एक साताभित्र दलहरूलाई सहमतीय प्रधानमन्त्रीको नाम दिन आह्वान गरेलगत्तै...
जब लत बन्छ इन्टरनेट
सूचना–प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै मानिसको जीवन जति सहज बनेको छ, त्यति नै जटिलता पनि थपिँदै गएका छन्। सूचना–प्रविधिले मानव जीवनमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। तर, यसका कारण सिर्जना भएका समस्या...